Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l0812 lah
Ny toetry ny Fiangonana (1)
Alahady 18 Nov.
Rehefa miresaka ny toetoetry ny zavatra anankiray isika, dia mazàna ny niandohany sy ny fampiasana azy ary ny zava-kendreny no mahaliana antsika. Ankoatra ireo sary an’ohatra maro ampiasainy hanoritsoritana ny fiangonana, dia mampiasa teny manokana ny Baiboly iantsoana azy: «ecclesia», izay midika hoe “nantsoina” na “notaomina”. Teo amin’ny fiainan’ny Grika tsy misy ifandraisany amin’ny lafiny fivavahana, dia nampiasaina indrindra indrindra io teny io hilazana ny sokajin’ireo olom-pirenena izay nantsoina hiala teny amin’ny fonenana misy azy ka hivory eny amin’ny toeram-pivorian’ny fokonolona. Amin’ny heviny an-kapobeny no ampiasan’ny Testamenta Vaovao azy.
Amin’ny fandikan-teny grika ny Testamenta Taloha (antsoina hoe ‘Septante’), dia «ecclesia» no niantsoana ny “fiangonan’”ny Isiraely, indrindra rehefa nivory teo anatrehan’ny Tompo noho ny antony ara-pivavahana izy ireo.
“Nantsoina” ho vahoakan’Andriamanitra manokana ny Jiosy, ary nety ho nampiasain’ireo Kristianina voalohany io teny io hamantarana ireo Jiosy sy Jentilisa izay nantsoina ho vavolombelon’i Kristy rehefa nandray ny fahasoavan’Andriamanitra. Ao amin’ny Testamenta Vaovao, ny fiangonana dia fikambanan’ireo mpino mahatoky amin’ny andro farany. Ilaina ny manamarika fa tsy ny vatan-trano nanatanterahana ny fotoam-pivavahana velively no nampiasana ny teny hoe «ecclesia». Zava-dehibe ilaina marihina toy izany koa ny fisian’ny teny hoe “sinagôga”, izay tany am-boalohany dia nentina nilazana ny fivoriambe nataon’ny olona noho ny antony manokana, kanefa dia naleon’ny Kristianina nampiasa ny teny hoe «ecclesia». Na izany na tsy izany, samy milaza ireo teny roa ireo fa mifampitohy ara-tantara amin’ny fiangonana tany amin’ny Testamenta Taloha ny fiangonana atỳ amin’ny Testamenta Vaovao, izany hoe ny “fiangonan’” ny Isiraely (Asa. 7:38).
Ny teny hoe «ecclesia» amin’ny heviny an-kapobeny, dia antokon’olona izay Andriamanitra mihitsy no nanao dingana hiantso azy. Ahoana no hanampian’io antsika hahatakatra ny antony nampiasan’i Paoly an’io teny io ao anatin’ireto sehatra telo samihafa ireto? : (i) ny fiangonana any amin’ny tokantranon’ny mambra sasany (Rôm. 16:5; 1 Kôr. 16:19; (ii) ny fiangonana eny amin’ny vohitra lehibebe (1 Kôr. 1:2; Gal. 1:2); ary (iii) ny fiangonana eny anivon’ny faritra midadasika kokoa (Asa. 9:31).
Ny «ecclesia» dia maneho ny antokon’olona miara-mivory mba hanana fifandraisana mahavonjy amin’i Kristy. Midika io fa ny fiangonana isanisany, dia tsy hoe ampahany amin’ny fiangonana iray manontolo ihany fa izy tsirairay mihitsy no maneho ny fiangonana iray manontolo. Ankoatra izany, ny fiangonana dia iray manerana izao tontolo izao kanefa manatrika ihany koa eny anatin’ny fivoriana tsirairay avy.
Eritrereto ny amin’ny fiangonanao manokana, izay misolo tena ny fiangonan’ Andriamanitra iray manontolo. Inona ireo karazana andraikitra takin’izany aminao amin’ny maha-anisan’ny tenan’ny fiangonana anao ary inona koa no takiny amin’izany fiangonanao izany?